DAAWADA DHIRTA WAA ASALKA DAAWADA NALA SOO XIRIIR TEL +16312124467 AMA +447477751355: Isfiilatada
DAAWADA DHIRTA WAA ASALKA DAAWADA NALA SOO XIRIIR TEL +16312124467 AMA +447477751355
HADDII WICITAAN KA MAREYKANKA FREE KUU YAHAY AMA AAD ADEEGSATO VIBER KA WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA NUMBER KA AH +16312124467 SIDOO KALE WhatsApp WAXAAD NAGA HELEYSAAN NUMBERKA +447477751355 MEEL KASTA OO AAD DUNIDA KA JOOGTO DAAWOOYINKA WAXAA LAGUUGU SOO GAAR SIINAYAA QAABABKA D.H.L KA AMA BOOSTADA GUDAHA KENYA NA PARCELS. EMAIL US nalasooxiriir@live.com nalasooxiriir@doctor.com nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@consultant.com
TOOS ULA XIRIIR DHAQAATIIRTA TELEFOONKA +16312124467 AMA +19149775731
VIBER +16312124467 AMA +447477751355
WAXAAD SI TOOS AH NAGA LA SOO XIRIIRI KARTAAN TELKA +16312124467 AMA +19149775731
VIBER KU WAA +16312124467 +447477751355 XIRIIRKA TOOSKA WAA +19149775731 +390918777633
+16312124467 AMA +447477751355 MAHAD SANIDIIN
WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA TEL KA AH +16312124467 ISLA NUMBER KAN AYAAD ADEEGSAN KARTAA HADDII AAD ISTICMAASHO VIBER
WAXAAD DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA ADEEGSO VIBER NUMBER +16312124467
WAXAAD SI TOOS AH DHAQAATIIRTA KALA SOO XIRIIRI KARTAAN TELEFOON NUMBERADA KALA AH +16312124467 AMA KAN KALE EE AH +447477751355 TELEFOON KA FIXED KA AH WAA +390918777633 CINWAANADA EMAILKA KALA AH nalasooxiriir@live.com nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@yahoo.com SIDOO KALE WAXAAD SI TOOS AH DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA WAQTI KAMIDA 24 KII SAAC CINWAAN KU WAA nalasooxiriir@gmail.com MAHAD SANIDIIN.
Isfiilatadu waa cudurrada lagu kala
qaado galmada oo layska qaado marka
ay istaabtaan xubnaha galmada. Cudurka waxaa xataa gudbin karta
hooyada oo u gudbin karta ilmaha inta ay
uurka ku jiraan ama haddi ay dhiig u
shubto. Heerarka isfiilitada. Isfiilitada waxay martaa seddex heer: HEERKA 1aad Qiyaastii seddex usbuuc kadib marka
qofka ku dhacdo isfiilatada waxaa jirka ka soo
baxaya boog ay galeen bagteeriyo.
Boogtu waxay badanaa ka soo baxdaa
xubnaha galmada, laakiin wey ka soo
bixi kartaa xataa futada, afka gudihiisa ama meelo kale ee oogada ka mid ah.
Boogtu xanuun saas ma laha, dhowr usbuuc
kaddibna iyadaa iskeeda u baaba da
iyadoo aan la daweyn. Qanjirada u dhaw
boogta wey bararayaan, laakiin lama
dhibsado. Markan waxaa lagu jiraa heerka 1aad ee cudurka aadna looma
garto. HEERKA 2aad Haddii cudurka aan wax looga qaban
heerka 1aad, wuxuu laba bilood kaddib u
gudbayaa heerka 2aad. Dhibaatooyinka
caadiga u ah heerka 2aad waa firiirac ka
soo baxa meelo kala duwan ee oogada
ah, timaha oo daata, qanjirbarar, xoogaa qandho ah, madax xanuun iyo daal. Haddii cudurka aan lagu daaweyn heerka
2aad, wuxuu u gudbayaa heer cusub oo
uu qarsoon yahay, kaasoo qofkana uusan
wax dhibaato ah qabin. Isku daarashada
xaga galmadana wey yaraaneysaa ,
laakiin weli waa la qaadsiin karaa ilmaha uurka ku jira. HEERKA 3aad Sanado badan keddib wuxuu cudurku u
gudbi karaa heerka 3aad, markaas oo uu
weeraro maskaxda, wadnaha, haragga
iyo lafaha. CALAAMADAHA LAGU GARTO Wejiga 1aad (Xilliga hore ee waraabowga)
Calaamaduhu waxay soo muuqdaan
1-12 toddobaad ka dib marka cudurka la
1:Nabarro aan xanuun lahayn oo ka soo
baxa afka, xubnaha taranka ama dabada
2:Nabaradu waxay ku qarsoonaan karaan gudaha xubinta taranka
haweenka ama malawadka
waxay gaaraan 1-5 toddobaad
Nabaradu way baaba'aan, laakiin
waraabowgu weli wuu ku jiraa dhiigga
Wejiga 2aad (Xilliga labaad ee waraabowga)
Calaamaduhu waxay soo muuqdaan 6
toddobaad ilaa 6 bilood ka dib marka ay
finanka cudurkani soo baxaan
1:Finan yaryar (faniinac) oo ka soo daata
meel kasta oo jirka ka mid ah
2:Calaamado u eg hargabka nooca Flu-ga Wejiga Suursan (qarsoon)
Ma jiraan wax nabarro ama finan ah,
laakiin waraabowgu weli wuu ku jiraa
dhiigga isagoo waqtiyada dambe
saameyn ku yeelan kara wadnaha,
maskaxda, iyo xubnaha kaleba (wejiga
saddexaad ee waraabowga) ISU GUDBINTA Waraabowga waxa Fidiya:
1:Galmada caadiga ah
2:Galmada aan caadiga ahayn
3:Hooyo cudurka qabta oo u gudbisa
ilmaha DHIBAATOOYINKA KA YIMAADA
CUDURKAN Haddii Aan la Daaweyn, Waraabowgu
wuxuu Keeni Karaa:
1:Cudurka wadna xanuunka
3:Waxyeello soo gaarta maskaxda Waraabowga Waqtiga Urka la Leeyahay
1:In haweenka uurka leh dhalaan ilmo
2:Ilmaha oo dhasha isagoo wax qaba
3:Waxyeelo culus oo soo gaarta lafaha,
maskaxda, sambabada, beerka, iyo
xubnaha kale ee ilmaha cudurka qaaday
Daawo maleeyahay cudurkaan?
Haa inshaa allaah daawo active ah oo la hubo ayuu leeyahay cudurkaani iyadoo hadii alle idmo looga bogsoon doono muddo 1 bil ah inshaa allaah.
Hadii aad dareento calaamadaha cudurkaan isfiilatada ama uu dhibaato kgu hayo la soo xiriir dhaqaatiirta website kan waxaan kuu ballan qaadeynaa daawo wax tarkeeda la hubo dhibaatana laheyn si fudud iyo waqti yar na aad qaadaneyso talo iyo tusaaleyn iyo caawimaad intii awoodeena ah ayaan diyaar kuula nahay inshaa allaah mahad sanididiin.
Waraabowga iyo isfiilatada ay soomaalida u taqaano isfiilato ma aha cudurkan qatarta ah ee la is qaad siiyo waana arrin si khaldan loo faham siiyey marka sidaa u ogaada isfiilato waa cudur xun oo qatar ah inta badan somalida qofkii xanaaq badan ama dulqaadkiisu yar yahay ama gacan qaadkiisu badan yahay ama ciddiyaha madow noqdeen ama bur bureen ayey aamin san yihiin in uu qabo cudurka isfiilatada ama waraabowga arrintaana sax ma aha. Waxaa inta badan astaamaha noocaasi keena waa infectionada qaarkood oo iyaga sababa arimahan oo kale sidoo kale waxaa arimahaa iyaguna dadka qaarkii u keeni kara xanuunka qatarta ah ee banii aadamku sahashado ee loo yaqaano baabasiirka mahad sanidiin.